४० बर्षिया महिलाको ब्यथा- बिहेअघि कुमारी नै थिए अहिले पनि कुमारी नै छु – Namaste Host
March 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ४० बर्षिया महिलाको ब्यथा- बिहेअघि कुमारी नै थिए अहिले पनि कुमारी नै छु
त्यो घटनाले मलाई निकै दुखित बनायो । मेरो कल्पनामा थियो । जब म कोठाभित्र पुग्ने छु अनि तत्कालै मेरा पतिले मलाई बलियोसँग समात्ने छन्, मेरा शरीरभरि चुम्बन गर्ने छन् तथा हामी सौम्य तरिकाले रातभरि मायामा बाँधिने छौँ। तर वास्तविकता फरक थियो, म कोठोमा आउनुअघि नै मेरा पति निदाइ सकेका थिए । त्यस बेला म ३५ वर्षकी थिएँ र कुमारीत्व पनि गुमाएकी थिइन । मेरो पतिको व्यवहार पीडादायक थियो ।
महिलालाई थाहा हुन्छ, पुरुषलाई बिस्तारै बिस्तारै आफूतिर कसरी आकर्षित गर्ने भनेर । म उसकै अगाडि लुगा फेर्थेँ, नां-गिन्थ्येँ तर उ मलाई देखे पनि नदेखे झैँ गर्थ्यो। के मेरो वजन नै कारण थियो त ? कि मैले विवाह लागि उसलाई दबाब दिएँ ? मेरा माइती पक्ष बिहेपछि म सुखी छु भन्ने भ्रममा थिए अनि मैले कोसँग आफ्ना व्यथा साट्नु ? मलाई कुनै निकासको आवश्यकता थियो ।
June 21, 2021 Bijay Lama